Imibuzo evame ukubuzwa - Shanghai Newera Viscid Products Co., Ltd.
Q1: Ingabe ungumkhiqizi noma inkampani yokuhweba?
1) I-Shanghai Newera Viscid Products Co, Ltd yasungulwa ngo-1990 eShanghai, eChina. Njengomhlinzeki womkhiqizi wegolide ohlanganyela kutapey yokunamathisela iminyaka engama-30 yokuthekelisa ukuthekelisa.
2) imishini ehlukahlukene engama-20, okukhipha nsuku zonke kungafinyelela kumamitha skwele ayi-100,000. kufaka phakathi imikhiqizo yochungechunge eyi-14, imikhiqizo eqediwe engaphezu kuka-100 kanye nemiqulu engama-jumbo eqeda ukwenziwa engaphezu kwama-30.
4) Nikeza insizakalo eyenziwe ngezifiso ye-OEM.
Q2: Iziphi izitifiketi onazo?
ROHS, CE, UL, SGS, ISO9001, Finyelela.
I-Q3: Singakwazi ukwenza ngokwezifiso usayizi womkhiqizo nephakheji?
Yebo, singenza abanye osayizi namaphakeji njengokufuneka kwakho, imvamisa ikhotheshini lethu lizoqukatha iphakethe elijwayelekile. Uma udinga amaphakheji enziwe ngezifiso, sicela weluleke imfuneko yakho ngaphambi kwesikhathi ukuthola isilinganiso esinembile.
Q4. Ingabe amasampuli ayatholakala?
Q5: Yisiphi isikhathi sokuhola sesampula nokukhiqiza?
Kuzothatha kungakapheli isonto elilodwa isampula nezinsuku ezizungeze ezingama-25 ukukhiqizwa ngobuningi. Isikhathi esiqondile sincike ekwakhiweni naseku-odeni kwakho.
Q6: Ungaqinisekisa kanjani ikhwalithi?
1.Ngaphambi komkhiqizo: thumela amasampula wokuhlola.
2.Ngesikhathi sokukhiqiza: thumela izithombe ne-vidio yokukhiqiza kuwe.
3.Ngaphambi kokuthunyelwa: cela i-ejensi yokuhlola yomuntu wesithathu efektri yethu ukuthi inikeze izimpahla noma singathumela amasampula wokukhiqiza ngobuningi ukuze sihlolwe.
4.Ngemuva kokuthunyelwa: uma kukhona inkinga ngenxa yephutha lethu, sizozibophezela.
Q7: Yimaphi amagama wokuhweba ongawamukela?
1) Imigomo yokuhweba: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP ...
2) Izindlela zokukhokha: T / T, L / C ...
3) Indlela yezokuthutha: Ngomoya, ngolwandle, ngesitimela ...
Q8: Singakusebenzisa yini ukuklama kwethu?
Yebo, isb., Umbala, ukuphrinta, ilogo, umnyombo wephepha, ibhokisi lebhokisi konke kungenziwa ngezifiso. Nikeza ngezinsizakalo ze-OEM.
Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi:peter_zhang01@sh-era.com